DEG-DEG: Arsenal Oo Saacadaha Soo Socda Ku Dhawaaqaysa Saxeexa Xiddig Weyn Oo Reer Brazil Ah - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Arsenal Oo Saacadaha Soo Socda Ku Dhawaaqaysa Saxeexa Xiddig Weyn Oo Reer Brazil Ah
DEG-DEG: Arsenal Oo Saacadaha Soo Socda Ku Dhawaaqaysa Saxeexa Xiddig Weyn Oo Reer Brazil Ah
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay dhamaystirto saxeexa xiddig weyn oo reer Brazil ah oo uu Mikel Arteta kusoo kordhinayo safkiisa, kaas oo haddii ay xaqiijistaan ka caawin doona inay u dagaallamaan in ay xajistaan booskooda kaalinta afraad iyo inay horumar ka sameeyaan tartamada kale.
Arsenal ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay wada-hadallo kula jirtay Juventus oo ay ka doonayso kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Arthur Melo, si uu u xalliyo khadkooda dhexe ee liigaya, isla markaana uu uga garab ciyaaro Albert Sambi Lokonga waqtigan oo ay koobka qaramada Afrika kaga maqan yihiin Mohamed Elneney iyo Thomas Partey.
Kooxda reer London oo dhowaan amaah ku bixisay Ainsley Maitland-Niles ayaa waxa saddexda ciyaarood ee soo socda ganaaxa kaga maqnaan doona Granit Xhaka oo kaadh cas oo toos ah qaatay ciyaartii Liverpool ee Khamiistii, waxaana usii raacaya Martin Odegaard oo uu ku dhacay Fayraska Korona oo aan la hubin inuu diyaar u noqon karayo kulanka London derby ee Tottenham.
Sida uu ogaaday wargeyska FourFourTwo, Arsenal ayaa tallaabooyin u jirta saxeexa Arthur Melo oo ay lix bilood oo heshiis amaah kagala soo wareegayso Juventus, waxaana heshiiska la dhamaystiri karaa saacado gudahood.
Tababaraha Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa la rumaysan yahay in uu doonayo inuu helo beddelka Melo ka hor inta aanu u ogolaan inuu iska baxo, waxaana uu danaynayaa in Ruben Loftus-Cheek uu ka dhigto beddelkiisa, isla markaana uu kala soo wareego Chelsea.
Arthur Melo ayay Barcelona sannadkii 2018 kala soo wareegtay kooxda reer Brazil ee Gremiyo, waxaana uu sannadkii 2020 uu u wareegay Juventus isaga oo qayb ka ahaa heshiis ciyaartooyo is-weydaarsi ah oo ay ku kala beddesheen Miralem Pjanic oo ay Juventus lacag ku dartay.